Chirongwa cheZuva - Huntersville, NC - Hinds Feet Farm
Chirongwa cheZuva - Huntersville, NC
Kugamuchirwa kuHinds 'Feet Farm Day Chirongwa, Huntersville nzvimbo.
Hinds' Feet Farm iri pa14625 Black Farms Rd, Huntersville NC.
Quick Facts Kuti Utange
▸Kudya kwemasikati kunopihwa here?
Kwete, Nhengo dzinokumbirwa kuti dziuye nezvokudya zvadzo zvemasikati. Tine firiji/firiza uye mamicrowave aripo.
▸Zvekufambisa zviripo here?
Dzimwe nzira dzekufambisa dziripo. Ndapota taura nehofisi yedu kuti tikurukure zvido zvekufambisa.
Chelsea Willis, Day Program Coordinator -- cboyette@hindsfeetfarm.org
Gore rose, Muvhuro kusvika China kubva 9:00 am kusvika 3:00pm
▸Ndiani anogona kupinda?
Nhengo dzinofanirwa kunge dziri pamusoro pemakore gumi nemasere uye dzine chirwere cheTBI (kukuvara kwehuropi) kana ABI (yakawana kukuvara kwehuropi).
Iva anokwanisa kuzadzisa zvaunoda, kusanganisira kunwa mushonga, kana kuve neako pachako
mutarisiri kana nhengo yemhuri kuti avabatsire.
Kukwanisa kutaurirana nevamwe kuburikidza nekutaura, kusaina, zvishandiso zvekubatsira kana muchengeti.
Usashandise doro kana zvinodhaka zvisiri pamutemo panguva dzechirongwa; kushandiswa kwezvigadzirwa zvefodya mune zvakatarwa
Tevera Mitemo Yepurogiramu.
Rega zviito zvinoisa njodzi kune iwe kana vamwe.
Iva neakachengetedzwa nhengo yemari sosi kuburikidza North Carolina's Dhipatimendi rehutano & Human Services, Chikamu cheUtano hweMental, Hurema Hwebudiriro uye Masevhisi eKushandiswa Kwezvinodhaka (NC DHHS DMH/DD/SAS) Medicaid, kana mubhadharo wega.
▸anoita yaiita sei zvikuru?
Kana iwe uchikodzera kushandirwa pasi pekondirakiti yedu yebasa neVaya Health LME/MCO, Cardinal Innovations, Partners Behavioral Health Management, Medicaid Innovations Waiver kana iyo North Carolina TBI Fund, tinogona kukubatsira kuona kana ukasangana nezvinodiwa.
Chero ani ane kukuvara kwehuropi kusiri kukuvara kwehuropi (kusanganisira izvo zvinokonzerwa nesitiroko, aneurism, bundu remuuropi, kushaikwa kweokisijeni) ingave mubhadharo wega uye muripo unotarwa tichishandisa chiyero chedu chekutsvedza.
Isu tinokwanisa zvakare kugamuchira mari yekupihwa semuripo wevashandi uye mamwe mainishuwarenzi akazvimirira.